Kedu ihe bụ ara ara na -achọgharị maka akara na ebumnuche - Ụzọ Ndụ
ọ dị m mkpa ịzụta ihe nchekwa icloud karịa
mkpụrụ ojii n'ime akwụkwọ nsọ
vidiyo na iphone anaghị arụ ọrụ
Kedu ihe na -akpụ ara ara? Ịbanye na ihe kpatara ya
What Is Left Breast Scratching
Kedu ihe ọ pụtara mgbe ara gị na -egbu mmụọ nkwenkwe ụgha ?.
Kedu ihe ọ pụtara mgbe tittes gị itch ?. N'oge ochie enwere ọtụtụ nkwenkwe ụgha na akara ndị ejikọtara na ahụ mmadụ. Mme owo mfịn inịmke esisịt ke n̄kpọ oro owo mlusivekemeke ndikụt. Ọtụtụ na -ele nkọwa ndị a anya, mana ọ bụghị ihe ọhụrụ ka ndị na -eto eto na -akpọku ndị nnọchi anya ọgbọ ochie ka ha dokwuo anya otu ihe gbasara ahụike. Dịka ọmụmaatụ, ebe ara aka ekpe na -ama akara, yana akara nke ejikọrọ na ya.
Itch left chest - meaning of signs
Itching n'otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ ahụ ọzọ ka a na -ewere dị ka ihe na -ebute ụzọ na ihe omume niile. Achọpụtara ara ara ekpe n'ihe gbasara obi, jikọtara ya na ahụmịhe mmetụta uche, a tụgharịrị ụdị ahụ ahụ n'ụzọ dị iche dabere na afọ na okike.
Na ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị
Ọ dịla anya ekwenyela na itching na ara aka ekpe na -ebu amụma alụmdi na nwunye na -aga nke ọma na ego na ụmụ agbọghọ.
Maka ụmụ nwanyị nke afọ niile, nke a pụtara ihe ndị a:
n'ịhụ di ya na -amaghị ama n'anya;
n'oge na -adịghị anya izute ihe ịhụnanya;
onye mbụ hụrụ n'anya nrọ nke ụbọchị.
Na mgbakwunye, mmetụta nke itching n'akụkụ aka ekpe nke ara nwanyị nwere ike ịpụta na ihe ịhụnanya na -echekarị banyere ya.
Ụmụ nwoke na ụmụ nwoke
Ekwenyere na ndị nnọchianya nke mmekọahụ siri ike anaghị enwe mmetụta na mmetụta karịa ụmụ agbọghọ ahụ, na -etinyekwu mkpa n'ọkwa ọha. Ọ bụ ya mere ọdịdị nke itching n'akụkụ aka ekpe nke obi bụ ihe kpatara na ụmụ nwoke abụghị naanị ịtụ anya mgbanwe na ndụ onwe ha, kamakwa n'ọnọdụ ego.
Mmetụta na -adịghị akwụsị akwụsị n'ụdị ụdị a n'ime ụmụ nwoke na -ebilite tupu ihe omume ndị a:
mmezu nke nrọ a hụrụ n'anya;
idozi nsogbu ego;
mbido mbụ na ọkara nke abụọ.
Ọzọkwa, itching nwere ike bụrụ ihe mmalite nye nwoke na nwanyị ịnata nnukwu ego n'ọdịnihu dị nso, yana nzukọ na ndị enyi ochie.
Ị maara? A na -ekwenyebu na ọ bụrụ na ara aka ekpe akpọnwụ, ọ dị mkpa igosipụta oke mmasị gị, mgbe ahụ ọ ga -emezurịrị. Ihe dị mkpa abụghị ilele oge a na windo ma ọ bụ enyo, ma ọ bụghị na ọ ga -efepụ. Ọ ka mma ịghara ile anya gburugburu ma ọ bụ mechie anya gị nke ọma.
Kedu ihe na -agba ara ara n'ụtụtụ na n'anyasị?
A na -atụgharị ihe ịrịba ama ihe kpatara ara ara ji agbawa n'ụzọ dị iche ma dabere ọ bụghị naanị na okike nke onye ahụ, kamakwa na oge mmetụta pụtara.
Dị ka a na -achị, itching ụtụtụ bụ ihe na -egosi ihe omume dị ụtọ. Mgbanwe dị mma nwere ike imetụta mmekọrịta ịhụnanya yana ọbụbụenyi, kamakwa ọnọdụ ego na ọrụ.
Ọnọdụ adịghị ka Rosy ka igbe si n'aka ekpe si na mgbede kụọ ya. Enwere ohere dị elu ịnata akụkọ ọjọọ, ọrụ ndị dara ada, nsogbu ego, aghụghọ, ịkwa iko ma ọ bụ imebi mmekọrịta n'etiti ndị mmadụ.
Nke a bụ ihe na -atọ ụtọ: ka esi agbasa ara n'ime ụlọ
Kedu akara ndị ọzọ nke obi ekpe?
Ruo ọtụtụ narị afọ, ekwenyere na akụkụ aka nri nke Chineke, yana aka ekpe - nke ekwensu. Yabụ, ọ bụrụ na itching na obi aka ekpe, amụma nwere ike ọ gaghị abụ nke kacha nwee ọ joyụ.
Ngosipụta ndị a bụ mgbe ụfọdụ na -egosi ihe omume ndị a adịghị mma:
nsogbu na ndụ ezinụlọ;
na -ese okwu na ndị ị hụrụ n'anya;
enweghị afọ ojuju na ndụ chiri anya;
esemokwu metụtara ọrụ;
mfu nke akụ na ụba ma ọ bụ nnukwu ego.
Dị ka ara aka ekpe nke ndị nwoke na ndị nwanyị itching na ikpe ebe mmadụ nwere iwe na ha ma nwee atụmatụ ịbọ ọbọ.
Hụkwa: gịnị kpatara o ji na -egbu mgbu n'aka nri?
Kedu ihe ihe onyonyo a pụtara site n'ihe gbasara ahụike?
Mgbe a gwọchara ihe ịrịba ama nke mba, ọ gaghị ekwe omume ileghara ihe niile na -eme kwa ụbọchị anya, na -akpata itching na ara.
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ihe ndị a:
Mgbanwe ihu igwe. Ọ dịla anya egosila na ahụ mmadụ na -enwe mmetụta maka mgbanwe ihu igwe, oke ikuku magnetik na ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na -agbagọ ma nwee ọnya nkwonkwo, ma ọ bụ nwee ihe mgbu n'ụkwụ emerụrụ ahụ, ọbụlagodi na ọ mere ogologo oge gara aga. Igbe nwere ike itụcha maka otu ihe ahụ.
Akpụkpọ anụ. Ọ bụghị naanị na ihe omume a na -emetụta usoro metabolic nke dị na epithelium, mana ọ nwekwara ike rụọ ọrụ dịka nzaghachi nye ikpughe anyanwụ ogologo oge mgbe akpụkpọ ahụ na -ere ọkụ.
Mụbara ajirija. Nke a bụ ọnọdụ megidere ya mgbe ọrụ glands dị oke elu. Ebe ọ bụ na ọsụsọ bụ mmiri na -emebi emebi nke ukwuu, ọ nwere ike bute mgbakasị akpụkpọ ahụ, nke e ji mara itching.
Ndị nfụkasị ahụ. Otu n'ime ihe mgbaàmà nke ọnọdụ a na -adịghị mma bụ akpụkpọ anụ. Mmeghachi omume dị otú ahụ nwere ike ibute site na ihe dị iche iche, gụnyere nsị ahụhụ, iji ngwaahịa eme ihe n'ụzọ na -adịghị mma ma ọ bụ ị takingụ ọgwụ ụfọdụ. Ihe nfụkasị nwekwara ike ime ka gel ịsa ahụ, ude ịchọ mma ma ọ bụ ntụ ntụ saa akwa nke metụrụ akpụkpọ anụ.
Akwa ime adịghị mma ma ọ bụ adịghị mma. Mgbe akwa a na -eme akwa ya na akpụkpọ ahụ sitere na ihe sịntetị nke na -anaghị ekwe ka ikuku gafere, itching nwere ike ime. Agbanyeghị, ụfọdụ eriri eke nwere ike ịta ma kpatara ahụ erughị ala. Na mgbakwunye, nwanyị ọ bụla maara nke ọma na ọ bụghị mmetụta kacha atọ ụtọ nke na -eme n'ime ara n'ihi iyi bra, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ pere mpe.
Usoro mmega ahụ na glands mammary nke ụmụ nwanyị. N'oge uto, mgbe ara ụmụ agbọghọ na -eto nke ọma, itching bụ ihe a na -ahụkarị. Mana ọ bụrụ na nwanyị toro eto abịarute n'ụzọ dị egwu, kamakwa n'oge ime ma ọ bụ na -enye nwa ara, mgbe ara na -abawanye, nke a nwere ike bute ahụ erughị ala.
N'inye ihe a dị n'elu, ịchọ azịza maka ihe kpatara ara aka ekpe ji na -egbu mgbu, ọ bụghị naanị nkọwa nke akara ndị mmadụ. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ihe niile dị n'ụwa, mgbe achọpụtachara na iwepụ nke ahụ erughị ala ga -agafe.
Kansụl. Ọ bụrụ na ara na -afụkarị ya ụfụ, ị ga -akwụsị ihe omimi ma lebara ahụike gị anya. Mgbaàmà dị otú ahụ nwere ike bụrụ akara nke nsogbu, na nke a ọ gaghị ekwe omume ịhapụ ihe niile ka ọ gaa. Ọ ka mma ịchọ enyemaka n'aka ndị ọkachamara ozugbo.